Qof kasta ha aqriyo Qisadan, gaar ahaan Ardayda Qalin jabisay ee Shaqo doonka ah.. | Entertainment and News Site
Home » bulshada » Qof kasta ha aqriyo Qisadan, gaar ahaan Ardayda Qalin jabisay ee Shaqo doonka ah..
Qof kasta ha aqriyo Qisadan, gaar ahaan Ardayda Qalin jabisay ee Shaqo doonka ah..
daajis.com:- Wiil dhalinyaro ah ayaa shaqo Maamule shirkad weyn ka codsaday. Wuxuu interview u soo hor fariistay Agaasimihi Guud oo CV-gisa ka ogaaday in natiijada waxbarashadiisi sareysay. Wuxuu weydiiyay in Aabihii Schoolka ka bixin jiray? Wuxuu ku jawaabay, Maya Hooyadey baa iga bixin jirtay.
Marnaba ha hilmaamin dhibti lagaa soo maray, sidi waalidkaa waxbarashada kaaga soo bixiyeen. Waxa keliya aad ugu abaalgudi karto waa inaad sameysaa wixi ay kaa rabeen oo ah inaad meel ka soo baxdo, ciyaar aadan gelin, waqtiga aadan bilaa micne ku lumin. dhexda aad xirato, halgan nolosha ah aad gasho.
Allaha tuso waalid badan caruurtoodi oo wixi ay ka rabeen iyo riyadoodi u rumeeyay.
Share – La Wadaag Asxaabtaada